शब्दहरू सुन्नु र दोहोर्याउने शब्दहरू दोहोरिने
फ्लैश कार्ड विधि प्रयोग गर्दै
दृश्यहरूसँग संघहरू सिर्जना गर्दै
नयाँ शब्दहरू समावेश गर्ने वाक्य र वाक्यांशहरूको सम्झना
नयाँ शब्दहरूको उच्चारण उनीहरूको समकक्ष र एन्टोन्यामहरूसँग नयाँ शब्दहरू याद गर्दै
तपाईंले सिक्नु भएको भाषामा फिल्महरू र भिडीयोहरू हेर्दै
प्रश्नको जवाफ दिन "शब्दावलीमा सुधार कसरी गर्ने?" यो तपाईंको मेमोरीको व्यक्तिगत वा भित्री विशेषताहरू बुझ्न पनि आवश्यक छ। केही व्यक्तिहरूका लागि सुन्नका लागि नयाँ शब्दहरू सम्झनका लागि राम्रो र छिटो छ, अरूको लागि, लिखित पाठ लेख्न र समीक्षा गर्न अधिक सक्षम छ। धेरै मानिसहरूले तस्विरहरू वा फोटाहरू प्रयोग गरी शब्दहरू याद गर्न प्रभावकारी पाउँछन्। त्यसोभए, तपाईं शब्दावलीमा सुधार गर्न विधिहरूको संयोजन चयन गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईंको लागि उत्तम काम गर्नेछ।
प्रायः सुन्नको लागि धेरै व्यक्तिहरूले नयाँ शब्दहरू राम्ररी सम्झन्छन्। तपाईंले अडियो रेकर्डिङहरू पाउन सक्नुहुनेछ जुन तपाईंले पढ्नु भएको सामग्रीबाट नयाँ शब्दहरू प्ले गर्न सक्नुहुन्छ, तर यदि तपाईंले रेकर्डिङमा शब्दहरूको आधा घण्टा पहिले नै सिक्नुभएको छ, तर बाँकी शब्दहरू याद गर्न संघर्ष गर्दै हुनुहुन्छ? यदि तपाइँ पहिले नै शब्दहरूको एकदम महत्वपूर्ण संख्या को याद गरेको छ भने, सम्पूर्ण अडियो रेकर्डिङ सुन्न यो अनावश्यक छ भन्ने स्वीकार गरौं। यसको अतिरिक्त, प्रत्येक व्यक्ति को लागि शब्दहरु को बीच दोहराव को संख्या र पजहरुको आकार व्यक्तिगत को तपाईंको स्मृति को विशेषताहरु मा आधारित हुनु पर्छ। यस उद्देश्यको लागि, हामी एक अनोखी LingoCard अडियो प्लेयर विकसित गर्यौं, जसमा तपाईं सबै सिकेका शब्दहरू मेट्न सक्नुहुन्छ र केवल तपाईहरूलाई वास्तवमा थाहा छैन सुन्नुहोस्। तपाईं शब्दहरू (वा तिनीहरूको अनुवादहरू) को दोहोर्याउने संख्या समायोजन र सेटिङमा शब्दहरू बीचको पङ्क्तिहरूको लम्बाइ समायोजन गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईंको लागि सबै भन्दा राम्रो काम गर्नेछ। कुनै पाठ फाईलहरूबाट तपाइँको आफ्नै सामग्री सिर्जना गर्न र सुन्न पनि सम्भव छ। सरल रूपमा अनुवादमा प्लेयरमा पाठ अपलोड गर्नुहोस् र सुन्नुहोस्। यदि तपाईंसँग अध्ययन गर्न नि: शुल्क समय छैन भने यो विधि विशेष गरी प्रभावकारी हुन्छ, किनभने तपाइँ कुनै पनि समयमा र जहाँ पनि सिक्न सामग्री सुन्न सक्नुहुन्छ। हाल, निश्चित विषयहरूमा अडियो पुस्तकहरूको एक ठूलो संख्या उपलब्ध छन्। नयाँ शब्दहरू मेमोरी गर्न, तपाईं उनीहरूको अनुप्रयोगमा तपाईंको सूचीमा पनि थप्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि तिनीहरूलाई प्रयोग गरेर सुन्नुहोस्।
शब्दावलीमा सुधार गर्ने सबैभन्दा लोकप्रिय तरिका फ्लैश कार्डहरू सिर्जना गर्दैछ, जहाँ कार्डको एक छेउमा कडा-सम्झनामा शब्द छ, र अर्को पक्षमा शब्दको अर्थ वा अनुवाद छ। कार्डको डेक सिर्जना गरेपछि, तपाईँले ती डेकहरू सिकेका नभएसम्म, तिनीहरूलाई हेर्नु भएको छ, तपाईंले पहिल्यै अध्ययन गर्नुभएको कार्डहरू बिस्तारै सेट गर्न सक्नुहुन्छ। यस विधि को उपयोग गरेर केहि महिना को लागी, मैले पहिले देखि नै सय सौ कार्डहरु थिए कि वरपर को लागी लगभग असुविधाजनक थियो। म पनि याद गरिएको शब्दहरूको क्रम परिवर्तन गर्न चाहन्थे, उदाहरणका लागि: वर्णमाला रूपमा, रिवर्स वर्णमाला क्रम, अनियमित रूपमा, विषयहरूमा र त्यसमा। त्यसैले मैले एउटा स्मार्टफोन प्रयोग गर्ने निर्णय गरेँ, तर मैले सरल र सुविधाजनक अनुप्रयोग फेला पारेन। त्यसैले मेरो स्मार्टफोनका लागि नयाँ अनुप्रयोग सिर्जना गर्ने विचार थियो, र एक महिना पछि पछि मैले फ्लैश कार्ड र एक डेटाबेसको साथ पहिलो मोबाइल LingoCard आवेदन विकास गरे। यो कुनै पनि शब्दको भ्वाईसिंग र कार्ड प्रयोग गर्न आवश्यक थियो र धेरै प्रयोग गरिएका शब्दहरूसँग धेरै डेटाबेसहरू सिर्जना गर्दथ्यो। मैले कार्यान्वयन विकल्पहरूमा मैले केही ज्ञानपुर्ण विकासकर्ताहरूको बारेमा छलफल गर्न थालें। मानिसहरूले मेरो विचार मन पराउँथे र परिणामस्वरूप उत्साही प्रोजेक्टमा सामेल हुन थाले। नयाँ विचारहरू लागू गरेपछि, हामीले त्यहाँ रोक्न निर्णय गरेनौं र दुई अपरेटिङ सिस्टमहरूमा पहिल्यै उपलब्ध धेरै अनन्य उपकरणहरू विकसित गर्न निर्णय गरे: एन्ड्रोइड र आईओएस। हामीले हाम्रो एपलाई Google Play मा र सबै देशहरू र सबै राष्ट्रीयताका लागि Apple Store मा नि: शुल्क निःशुल्क होस्ट गरेका छौं।
धेरै व्यक्तिहरू राम्रो दृश्य मेमोरी छन् र तिनीहरूका लागि भिजुअल इमेजहरू संग सङ्गठनहरू सिर्जना गर्न यो प्रभावकारी हुन सक्छ। उदाहरणको लागि, यदि तपाई वस्तु देख्नु हुन्छ भने विदेशी अर्थ जसको तपाईं तुरुन्तै सम्झन सक्नुहुन्न, तपाईले यो वस्तुको तस्वीर लिनु भएको छ र तपाईले पढिरहनुभएको भाषामा एक शब्द लेख्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो अनुप्रयोगको साथ, क्यामेराबाट फोटोहरू वा इन्टरनेटबाट कुनै तस्बिरहरूसँग फ्लैश कार्डहरू सिर्जना गर्न सम्भव छ। यसैले, यदि तपाइँसँग राम्रो भिजुअल मेमोरी छ र केहि शब्दहरू वा अभिव्यक्तिहरू सम्झन सक्नुहुन्न भने, तपाईंले यो शब्द केवल खोज इञ्जिनमा प्रतिलिपि गर्न सक्नुहुन्छ र कुनै पनि उपयुक्त तस्विर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ जुन फ्लैश-कार्डमा संलग्न छ।
यो शब्दावली सुधार गर्न र विदेशी भाषा सिक्नको एक धेरै प्रभावकारी तरिका हो। यसकारण, तपाईंले तुरुन्तै शब्द र वाक्य संरचनाको गुच्छा सम्झनुहुन्छ। यसले तपाइँले प्रत्येक शब्दलाई अलग-अलग शब्दलाई सम्झन आवश्यक बिना कुराकानीमा तयार-निर्मित वाक्य पुनःप्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ। यदि तपाईंले सिकेका शब्दहरू बहु अर्थहरू छन् भने यो विधि धेरै उत्पादक हुन सक्छ। यो अंग्रेजीमा उदाहरणको लागि धेरै सामान्य हो, र शब्दको प्रयोग बुझ्न, यो वाक्यमा याद गर्न राम्रो छ। हाम्रो साइटमा 120 हजार भन्दा विभिन्न विषयक शब्दकोश एकत्रित गरिन्छ र लगभग आधे सेकेन्डहरू र वाक्यहरू छन्।
नयाँ शब्दहरूको उच्चारण
तपाईंले सिकेका शब्दहरूको प्रायः र सही उच्चारण तिनीहरूलाई पूर्ण रूपमा सम्झन मद्दत गर्दछ। यो विधि पछि पछि दोहोरिने साथ शब्दहरूको उच्चारण सुन्न पछि प्रयोग गर्न राम्रो छ। तिनीहरूलाई अन्य सम्बन्धित शब्दहरू वा वाक्यहरूमा संयोजनमा लगाउने प्रयास गर्नुहोस्। हामीले सही उच्चारणको उदाहरण सुन्नको लागि कुनै पनि भाषामा सुन्न प्रकार्यको साथ सबै भाषा कार्डहरू प्रदान गर्यौं। अडियो प्लेयर सुरू गर्न पछि पजहरूमा शब्दहरूको उच्चारण दोहोर्याउन धेरै प्रभावकारी छ, र यस उद्देश्यका लागि यो प्लेयरको सेटिङ मेनुमा शब्दहरू बीचको पङ्क्तिहरूको लम्बाइ बढ्न राम्रो छ।
एक उत्कृष्ट प्रविधिको शब्दहरू उनीहरूको पर्याय वा अव्यवस्थित समकक्षहरूको साथमा याद गर्ने छ। अधिकांश मानिसहरूले संघको सहयोगको साथ सोच्छन्, र नयाँ जानकारीको सम्झनामा समान समान वा विरोध शब्दहरूको सिक्ने संयोजनसँग संयोजनमा धेरै प्रभावकारी हुन सक्छ। तपाईले यो प्रविधि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ सिमोनमहरू र एन्टोन्यामहरूसँग फ्लैश कार्डहरू सिर्जना गरेर। समानार्थीहरूसँग इन्टरनेटहरू डाउनलोड गर्नुहोस् र इन्टरनेटबाट एन्टोन्यामहरू डाउनलोड गर्नुहोस् वा तपाईंले सिकाउनु भएको भाषाको धेरै आत्म-शिक्षित ट्यूटोरियलहरूमा फेला पार्नुहोस्। तपाइँलाई आवश्यक प्रशिक्षण सामग्री संकलन पछि, तपाइँले हाम्रो अनुप्रयोगमा पाठ फाइलहरूमा अपलोड र अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। फलस्वरूप, तपाईंले आफ्नो अध्ययन सामाग्रीको लागि फ्लैश कार्डहरूको आफ्नै अपलोड गरिएको डाटाबेस सिर्जना गर्नुहुनेछ र यो हाम्रो सबै उपकरणहरू प्रयोग गरी शब्दहरूको कुनै संयोजन सिक्न सम्भव हुनेछ। यसको अतिरिक्त, समानार्थीहरु संग बनाएको एक ठूलो संख्या र अभिलेख संग हाम्रो डाटाबेस मा पहिले नै उपलब्ध छ। यो विधि प्रयोग गर्ने परिणामको रूपमा, तपाईं धेरै नयाँ शब्दहरूलाई तिनीहरूको समान वा विपरीत अर्थको साथ याद गर्न सक्नुहुन्छ, जसले तपाईंलाई तपाईंको शब्दावलीमा सुधार गर्न अनुमति दिन्छ।
यो सम्भवतः शब्दावली सुधार गर्न सबैभन्दा सुलभ र प्रभावकारी तरिका हो, जुन प्रत्यक्ष स्पिकरबाट प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो भाषा वातावरणबाट नयाँ शब्दहरूको सम्झनाको लागि यो राम्रो तरिका हो। जब नयाँ भाषा सिक्न, यो विशेष गरी स्लैंग र बेवकूफहरू कि फिचर फिल्महरूमा भेट्न सकिन्छ भनेर बुझ्न महत्त्वपूर्ण छ। तपाईलाई निर्णय गर्न चाहने कुन प्रकारको विदेशी भाषा तपाईं जान्न चाहानुहुन्छ। उदाहरणको लागि, अंग्रेजीमा अमेरिकी अंग्रेजी, अष्ट्रेलियाली अंग्रेजी, ब्रिटिश अंग्रेजी, र यति धेरै विभाजन छन्। तपाईंले सिक्न चाहानु भएको भाषाको आधारमा, तपाईंलाई फिल्महरू चयन गर्न आवश्यक छ जुन उचित देशमा गोली मारिएको थियो। उत्कृष्ट धारणाका लागि उपशीर्षकहरूसँग पहिलो चलचित्र हेर्नुहोस्। यदि तपाइँ एक शब्द सुन्नुहुन्छ जुन तपाइँ एक पटकमा सम्झन सक्नुहुन्न, तपाईंलाई यसलाई शब्दकोशमा तल लेख्न र पछि यसलाई दोहोर्याउन आवश्यक पर्दछ। जब एक मेहनती शब्द एक फिल्म मा भर आउँछ, म सामान्यतया पज, अनुवाद, र LingoCard आवेदन मा प्रतिलिपि को लागी। त्यसपछि म खेलाडीको सबै शब्दहरू सुन्नुहोस् र कार्डहरू प्रयोग गरेर तिनीहरूलाई सम्झनुहोस्। सामग्री को समेकन गर्न, अगली उपशीर्षक तपाईं बिना उपशीर्षक को लागी एक नै फिलिम देख्न सक्नुहुन्छ - यदि तपाईंले धेरै रोचक चलचित्र चयन गर्नुभयो, दोस्रो अवलोकन उबाऊ हुनेछैन। परिणामको रूपमा, तपाईंले प्रत्येक चलचित्रको साथ हेर्नुभयो, तपाईंलाई कम र कम नयाँ कार्डहरू बनाउन आवश्यक पर्दछ, किनभने तपाईंको शब्दावली लगातार विस्तार हुनेछ। नियमितताको बारेमा नबिर्सनुहोस्; एक भाषा सेट गर्न को लागी कम्तिमा एक चलचित्र एक भाषामा तपाईंले सिक्नुभएको भाषामा हेर्न, वा अझ राम्रा सबै चलचित्रहरू मात्र पढ्नुहुने भाषामा र केही समय पछि हेर्नु हुन्छ, तपाइँ नयाँ भाषा मास्टर गर्नेछ।
नियमितता। तपाइँ हरेक दिन अभ्यास गर्न आवश्यक छ।
प्रशिक्षणको लागि मात्र सबैभन्दा प्रभावकारी उपकरण छान्नुहोस्
नयाँ सामग्री अध्ययन गर्न र सिक्नको लागि उत्तम समय निर्धारण गर्नुहोस्
अध्ययन गरिएको सामग्रीको भोल्युमको विश्लेषण गर्नुहोस्
दैनिक मात्रा र कुल भोल्युम याद गर्न सामग्री को लागि एक स्पष्ट लक्ष्य सेट गर्नुहोस् हाम्रो मोबाइल अनुप्रयोगहरूमा, हामीले शब्दावली सुधार गर्न सबै सम्भावित तरिकाहरू लागू गर्न प्रयास गरेका छौं र अब तिनीहरू संसारमा कहीं पनि उपलब्ध छन्। तपाईं केवल आफ्नो स्मार्टफोनमा अनुप्रयोग स्थापना गर्न र क्लाउड सर्भरमा आफ्नो शब्दहरू बचत गर्न प्रणालीमा दर्ता गर्न आवश्यक छ। हामी सबै राष्ट्रीयताका मानिसहरूको लागि अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक प्लेटफर्म सिर्जना गर्न काम गरिरहेका छौं, जसले कुनै विदेशी भाषाहरू अध्ययन गर्ने मौका दिन्छ र विश्वभर भाषा भाषा अभ्यास गर्दछ। मलाई आशा छ कि हाम्रो घटनाक्रमहरूले तपाईंको सिकाउने उत्पादकतालाई महत्त्वपूर्ण बनाउनेछ र तपाईंलाई मद्दत गर्न तपाईँको शब्द संग्रह सुधार गर्न मद्दत गर्नेछ।